Ngikhansele Amathuluzi Wami Okubiza Ukubika Amawebhusayithi Namathuluzi Wokuhlaziya eDiib | Martech Zone
Ngikhansele Amathuluzi Wami Okubiza Ukubika Amawebhusayithi Namathuluzi Wokuhlaziya eDiib
ULwesihlanu, May 22, 2020 ULwesihlanu, May 22, 2020 Douglas Karr
Ngemali elahlekile ehlotshaniswa ne-COVID-19, bekufanele ngiphinde ngihlaziye kabusha imikhiqizo ebengiyisebenzisa ukucwaninga, ukuqapha, ukubika, nokwandisa amasayithi ami nalawo amaklayenti ami. Bengichitha amakhulu ambalwa wamadola ngenyanga ngamathuluzi ambalwa wokwenza lokhu. Futhi, ngalinye lamathuluzi lalinamathani amaningi emibiko nezinketho - kepha bekufanele ngicikize idatha ukuthola izeluleko ezisebenzayo engingazisebenzisa ukwengeza amasayithi.
Ngamanye amagama, bengikhokha ithani lemali… futhi bengingazitholi ngempela izimpendulo ebengizidinga. Ngike ngancokola ngalokhu esikhathini esedlule… ukuthi amathuluzi ezibalo alungile impela umbuzo izinjini hhayi impendulo izinjini. Kukuwe njengomhlaziyi ukukhomba nokubeka phambili amathuba emva kokumba idatha, ingxenye, ukuhlunga nokuqhathanisa indlela yokuziphatha kwabavakashi.
Ngifuna ukucaca njengoba ngichaza lo mkhiqizo engiwutholile - diib. Kukhona izinkulungwane zezinto ongazenza ngewebhusayithi ukuthuthukisa ukubonakala kwayo, ukukhula, nokuguqulwa kwayo. Okunye kokuhlaziywa kuhlala kudinga ukuthi umuntu ahumushe idatha iye ezenzweni.
UDiib: Injini Yezimpendulo
Le vidiyo evela ku- diib lapho yethulwa eminyakeni emi-5 eyedlule inikeza ukuqonda okuthile epulatifomu nokuthi ingasiza kanjani ibhizinisi lakho:
Ngibhalisele mahhala diib akhawunti futhi wahlabeka umxhwele ngaso leso sikhathi ngempendulo ehlakaniphile ipulatifomu ebivele iyinikeza kungakapheli nemizuzu eminingi ubhalisile. diib kuqala ngokuhlaziya iwebhusayithi yakho nokukhomba amathuba amakhulu wokukhulisa ukuthengisa kwakho. UDiib wehlela ezixazululweni ezine eziyinhloko:
Injini Yezimpendulo - ithuluzi elinamandla lokuxilonga lizoskena isiza sakho bese liqhamuka necebo lokukhulisa elenziwe ngokwezifiso ngokumane likunikeze izimpendulo.
Ama-Analytics - diib ayigcini nje ukukala idatha, bayiguqula ibe ngamanani wangempela wedola ngebhizinisi lakho elidlule, elamanje, nelizayo. Ungabona futhi ukuthi uzifaka kanjani embonini yakho.
Inqubekela phambili Tracker - Gcina umbhalo walokho yonke imizamo yakho nokufunda ukuze ubone ukuthi ufike kude kangakanani! Inqubekela phambili oyibonayo, kulapho uzoqhubeka uqhubeke!
Ilabhulali Yokufunda - Uma ungumkhangisi ozenzela yona, uDiib unezeluleko, amathuluzi nezifundo ezandleni zakho. Banelabhulali enkulu yama-1000s wamavidiyo, ama-athikili, amaphepha amhlophe nama-ebook.
I-Diib iletha ukuhlaziywa okulula, okunomthelela ophezulu, ukubika, nokubukwayo ukukwazisa ukuthi uqhuba kanjani nokuthi yini okufanele uyenze ngokulandelayo. Nge-diib ™ uyazi inani lonyaka lesayithi lakho nokuthi ibhizinisi lakho lenza kahle kangakanani ku-inthanethi embonini yakho. Futhi i-diib idala uhlelo lokukhula ngokwezifiso lokuba khona kwebhizinisi lakho online.
Bheka Impilo Yewebhusayithi Yakho
Okumaphakathi ekubikeni ukuqinisekiswa kokuqala kokuthi iwebhusayithi yakho iphilile ngempela. I-Diib ukwenza lokhu ngokuhlaziya lezi zici ezisemqoka zewebhusayithi enempilo:
Isitifiketi se-SSL: Ungahle ungabi nesayithi eliphephile noma isitifiketi sakho se-SSL asifakiwe kahle. I-DiibInjini yokuskena iyabukeka uma kuziwa kwezokuphepha futhi izokwazisa uma bebona noma yimaphi amaphutha abalulekile ngokwanele ukuthi angathinta amazinga akho noma abangele isexwayiso kusiphequluli sesivakashi.
Isivinini Seselula: I-Answer Engine ihlola ijubane lakho leselula nsuku zonke. Uma kunenkinga ngejubane lakho leselula, ifayela le- I-Diib izokuxwayisa.
Isizinda se-Domain / Backlinks: Lezi zimpawu zikutshela i-Moz Domain Authority yakho yamanje kanye nenani elikhulu lama-backlink akhomba kuwebhusayithi yakho. Ungabona futhi uhlu lwama-backlinks wakho abaluleke kakhulu.
I-Facebook / i-Google My Business Sync: uma ungavumelanisanga le mithombo emibili ebalulekile yedatha, I-Diib izokwazisa ukuze ungaphuthelwa izinhloso ezibalulekile nezixwayiso!
I-Sitemap: Lokhu kuskena kukutshela ukuthi siyitholile yini imephu yesayithi yewebhusayithi yakho noma cha. Amamephu esayithi asiza iGoogle nezinye izinjini zokusesha ukuthi zihambe kuwebhusayithi yakho.
Amagama angukhiye: Lokhu kukutshela ukuthi mangaki amagama angukhiye iwebhusayithi yakho ebhalwe ku-google. Ungabona kuze kufike ku-150 wamagama akho abaluleke kakhulu.
Uhlu olumnyama Lokhu ukuskena kwewebhusayithi kanye nekheli le-IP elikutshela ukuthi ama-imeyili akho alethwa emabhokisini okungenayo ekhasimende lakho noma cha. Uma diib kuthola ukuthi ama-imeyili akho kungenzeka ukuthi aya kumabhokisi ogaxekile esikhundleni samabhokisi wokungenayo azokwazisa futhi akusize ulungise inkinga.
Izinhloso Zokusesha, Ezenhlalo, Ezeselula, Nezendawo
Lapho sengisethe isiza sami, diib yayixhunywe ku-Google Analytics, i-Google Business, ne-Facebook ukuhlinzeka ngemininingwane yokusesha, yezenhlalo, yeselula neyasekhaya. Ipulatifomu lakhomba khona lapho izinhloso ezithile engingazibukeza kanye nezixhumanisi ezithile ezinhle zokufunda ukuthi:
I-Diib ihlaziye imininingwane ye-Facebook ukuthola ukuthi izindatshana zami zizoba nomthelela omkhulu kangakanani.
I-Diib ngibe nokuhlakanipha okuthile okungikhombisile ukuthi i-COVID-19 ibingathinti ithrafikhi yami yewebhusayithi.
I-Diib ngithole ezinye izixhumanisi eziphukile zangaphakathi ukuze ngizilungise
I-Diib ngithole amanye ama-backlink angahle abe nobuthi engingafisa ukuwaveza.
IDiib yinani elikhethekile
Ama-purists azosho ukuthi amathuluzi afana nalawa awanele ngokwanele. Lokho kungenzeka kube yiqiniso ngezizinda ezinkulu, eziyinkimbinkimbi ezimbonini ezinokuncintisana okukhulu. Kepha iningi lamabhizinisi alisebenzi lapho kudingeka lihlole zonke izici zokuba khona kwazo online ... bamatasa nokuqhuba amabhizinisi abo.
Ngezindleko eziphansi ze- diib, inani lidlula kude iningi lamapulatifomu laphaya. Ukuqapha kwezempilo, ukulinganisa, ukubikezela, izinhloso, kanye nezixwayiso kuzogcina umnikazi wesayithi omaphakathi ematasa phakathi konyaka ukwenza ngcono ukukhula kwewebhusayithi yabo nokukhula kwebhizinisi labo.
I-akhawunti ye-diib yamahhala inikeza:
Uhlelo Lokukhula Olinganiselwe - Ukufinyelela okulinganiselwe kwizaziso zansuku zonke ezihlakaniphile nezinhloso ezikukhombisa ukuthi ungakhula kanjani ngokushesha ithrafikhi nemali engenayo.
Ukuqapha Iwebhusayithi - Thola izexwayiso ngamaconsi omgwaqo angajwayelekile, ama-backlinks aphukile noma ogaxekile, izingqinamba zokusebenza, ukuphepha, noma izibuyekezo ze-Google search algorithms! Isexwayiso ngasinye sifaka izinyathelo ezenziwayo ukulungisa inkinga.
I-imeyili yesifinyezo yamaviki onke - Hlala unolwazi ngamathuba okukhula kanye nezinkinga ezingaba khona.
I-Daily Health Score - I-algorithm ehlakaniphile ye-diib ibheka isimo sewebhusayithi yakho ngesikhathi sangempela.
izilinganiso - Ukuqhathanisa ukusebenza kwewebhusayithi yakho kumawebhusayithi afanayo embonini yakho.
I-akhawunti ye-diib Pro ibiza u- $ 19.99- $ 29.99 / ngenyanga ngokuya ngethrafikhi yewebhusayithi futhi inikela ngakho konke ku-akhawunti yamahhala, kanye ne:
Uhlelo Lokukhula - Ukufinyelela okugcwele kwezixwayiso zansuku zonke nezinhloso ezikukhombisa ukuthi ungakhula kanjani ngokushesha ithrafikhi nemali engenayo.
Kuze kufike kumawebhusayithi angama-30 - Bona ukuthi wonke amawebhusayithi akho enza kanjani kusikrini esisodwa.
Usizo lochwepheshe noma kunini - Ukufinyelela kwamahhala kwama-24/7 kuchwepheshe wokuzinikela ozinikele.
ezokuxhum - I-diib ibheka ukusebenza kwakho kwangempela futhi ikunikeze ngemephu yangokwezifiso yokukhulisa lesi siteshi esibaluleke kakhulu.
SEO & angukhiye - Iziphakamiso zokuhlaziywa nokwenza ngcono ngokususelwa ku-premium Moz Semrush idatha.
Bheka Iwebhusayithi Yakho Yezempilo Manje!
Ukudalulwa: Siyinhlangano esebenzisana nathi diib.
Tags: injini yokuphendulai-covid-19diibukuhlaziywa kwe-googleI-google analyticsgoogle ibhizinisi lamiip uhlu olumnyamaanalytics mobileisivinini seselulaizibalo zokuseshaizibalo zomphakathisslukuqapha iwebhusayithiukuthuthukisa i-website
I-SEO Yasendaweni: Iyini ingcaphuno? Isakhiwo se-Citation?
Thuthukisa Ukuthengisa Kwakho Nokukhiqiza Ngalawa ma-Hacks ayisithupha